Man United oo ka welwelsan inuu Pogba bilaash kaga tago Old Trafford xagaaga dambe & culeyska ay wajaheyso si ay hesiiska u cusbooneysiiso oo sii kordhay – Gool FM
(Manchester) 20 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa walaac ka muujineysa inuu Paul Pogba dhammeysto qandaraaskiisa Old Trafford kaddibna xagaaga dambe uu bilaash kaga tago marka uu heshiiskiisa dhaco.
Qandaraaska Pogba uu kula jiro Man United ayaa dhici doono xagaaga 2022, ilaa iyo haddana ma jiraan wada-xaajood heshiis kordhin ah oo dhex maray labada dhinac.
Xiddigan khadka dhexe ka ciyaara ayaa bandhig cajiib ah ka sameynaya tartanka qarammada qaaradda Yurub kulammada uu matalayo xulkiisa Faransiiska, waxaana sii kordhaya xiisaha ay u kooxaha doonaya xiddigan u hayaan saxiixiisa.
Maamulka Red Devils ayaa diyaar u ah inay heshiiska u kordhiyaan xiddigan, balse waxaa culeyska ugu badan ay kala kulmayaan wakiilkiisa Mino Raiola kaasoo doonaya inuu xiddigan ka safriyo Old Trafford haddii uusan ka helin qodobbada heshiis kordhinta.
Raiola ayaa si shaqsi ah uga dalbaday Manchester United lacago fara badan si uu Pogba heshiiska ugu kordhiyo kooxdiisa, waxaana bandhigga cajiibka ah ee uu ka sameynayo Euro 2020 ay damac waalan sii gelin kartaa wakiilkan sida la saadaalinayo.
Si kastaba ha ahaatee, Juventus ayaa xiiseyneysa inay dib ula soo saxiixato 28-jirka farsamada badan kaasoo ay 2016 ka iibisay kooxda uu haatan ka tirsan yahay, balse waxaa jiri doona loollan dhanka suuqa kala iibsiga kaga imaan kara kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain kuwaasoo dhowr jeer isku dayay inay lasoo saxiixdaan.
Real Madrid oo baacsaneysa mid ka mid ah weeraryahannada xulka qaranka England... (Iska illow Harry Kane)